Selfie ပုံလှလှလေးတွေရအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ??? - Lifestyle Myanmar
Home Advertisements Selfie ပုံလှလှလေးတွေရအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ???
ချစ်တို့ရေ… ချစ်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Social Media တွေမှာ selfie ပုံလှလှလေးတွေ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်တောင်မြင်နေရလဲ။ အဲ့ဒီလို selfie လှလှလေးတွေကို ချစ်တို့ကိုယ်တိုင်ကော မရိုက်ကြည့်ချင်ကြဘူးလား။ ပီးပြည့်စုံတဲ့ selfie လှလှလေးရဖို့ ဆိုရင် “လေ့ကျင့်ခြင်းသည်သာ အာင်မြင်ရာ၏” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးအတိုင်း “များများရိုက်ပေါ့” ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုပဲ ပာတာကြားဖူးတယ်ဟုတ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ selfie လေးတစ်ခုအတွက် နာက်ကွယ်က ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်နော်။
Selfie လှလှလေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဖုန်းကင်မရာကောင်းကောင်းလေးကို ပးမြင်မိတယ်လို့ပြောရင် ချစ်တို့မငြင်းလောက်ပါဘူးနော်။ ဒါပေါ့ ရှ့ကင်မရာကော နာက်ကင်မရာပါကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိဖို့က ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်လေးပါ။ ခုဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းအများစုရဲ့ နာက်ကင်မရာတွေ့ အရည်အသွေးကောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက
နာက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ရတာဆိုတော့ ချစ်တို့အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပီးမှသာ ကိုယ့်ပုံက အဆင်ပြေလားမပြေလား ပန်ကြည့်နေရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ရှ့ကင်မရာတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင်မှာ ချစ်တို့ရဲ့ pose လေးတွေကို screen မှာကြည့်ပီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေအထားရပြီ ဆိုမှ ရိုက်လိုက်ယုံပဲ။
ဒါဆိုရင် စမတ်ဖုန်းတိုင်းရဲ့ အရှေ့ကင်မရာတွေက တကယ်ကောအလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား လို့
ချစ်တို့တွေးမိမှာပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် စမတ်ဖုန်းတိုင်းကတော့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ တချို့စမတ်ဖုန်းတွေကပဲ အရည်အသွေးမှီတဲ့ ရှ့ကင်မရာတွေကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာပါ။ ဥပမာ ခုတစ်လောနာမည်ကြီးနေတဲ့ Vivo V15 နဲ့ V15Pro ရဲ့ 32MP ရှိတဲ့ မင့်တက်ပွင့်ထွက်လာတဲ့ ရှ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ selfie လှလှလေးတွေ social media မှာတွေ့နေရပါတယ်နော်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုရှုထောင့်ကနေရိုက်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ချစ်တို့က selfie လှလှလေးရဖို့အတွက် filter လေးတွေ effect လေးတွေ သုံးလေ့ရှိတယ်မလား။ ဒါပေါ့ လှပတဲ့ selfie လေးရဖို့ edit လုပ်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော် ဒါပေမယ့် ချစ်တို့ကို selfie လေးထဲမှာ ပိုလှသွားစေဖို့အတွက် selfie angle လေးတွေက အကူညီပေးပါလိမ့်မယ်နော်။
၁။ မိမိမျက်နှာရဲ့ ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဖက်ကို သိအောင်ကြိုးစားပါ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လ့လာပြောကြားချက်အရ လူသားတွေရဲ့ မျက်နှာဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ထပ်တူညီလေ့မရှိပါဘူး။ တစ်ချို့က သူတို့မျက်နှာရဲ့ ဘယ်ဖက်က ပိုကြည့်ကောင်းတယ်ထင်ကြပြီး တစ်ချို့ကတော့ ညာဖက်က ပိုလှတယ်ထင်ကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အလှဆုံးဖက်ကို ခါင်းလေးနည်းနည်းစောင်းပြီး ရိုက်လေ့ရှိကြတယ်။ ဆိုတော့ကား ချစ်တို့လဲ ကိုယ့်မျက်နှာရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိတဲ့ဖက်ကို သိအောင် အရင်ဆုံးကြိုးစားသင့်တယ်နော်။
၂။ အကောင်းဆုံး ရှူထောင့်ကနေ selfie လှလှလေးတွေ ရိုက်ကြစို့
ကဲ ချစ်တို့ရေ … ကိုယ့်မျက်နှာရဲ့ ဘယ်အခြမ်းက ဓာတ်ပုံစားတယ်ဆိုတာ သိပြီဆိုရင်
နာက်တဆင့်ကတော့ ဘယ်အနေအထား၊ ဘယ် angle ကနေ ရိုက်မလဲဆိုတာပါပဲ။
လူတွေတော်တော်များများအတွက် အကောင်းဆုံး angle လေးကတော့ selfie ကင်မရာလေးကို ဓာတ်ပုံပိုစားတဲ့ ကိုယ်မျက်နှာဘက်အခြမ်းကို စာင်းရိုက်ရုံပါပဲ။ အာက်က အချက်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ချစ်တို့ရေ…
(၁) Straight on Angle
Selfie Angle တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးက အပေါ်ကရိုက်ခြင်းဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းကို မျက်နှာနဲ့ တည့်တည့်ထားပြီး ရိုက်တာမျိုးကလဲ အမြင်ဆန်းစေပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း စမတ်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် AI Beauty Feature လေးတွေ ပါဝင်လာကြတာဖြစ်လို့ Straight on Angle နဲ့ရိုက်ဖို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ အပြည့်လိမ်းထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ wild eye shadow လေးတွေ cat-eye လေးဆွဲထားတာမျိုးကို သတိထားမိစေချင်ရင်လည်း ဒီ straight on angle လေးက အဆင်အပြေဆုံးနော်။ ဒါ့အပြင် Vivo V15 နဲ့ V15Pro မှာ ပါဝင်တဲ့ AI Face Shaping နည်းပညာက မျက်နှာကို လိုသလိုပြုပြင်လို့ရသလို၊ ဘယ်လိုမှမပြုပြင်ပဲ ပုံမှန်အတိုင်း ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖူဖွေးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သဘာဝအတိုင်းလေး
(၂) Chin Down Angle
ဒီ angle လေးကတော့ မျက်နှာတည့်တည့်ထားရိုက်ခြင်း (Straight on angle) နဲ့ တ်ာတော်လေး ဆင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် chin down က မိန်းမသားဆန်မှု နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း ပိုပြီးဦးစားပေးပါတယ်။ မျက်နှာလေးကို အနည်းငယ်အောက်ကိုငုံ့ထားပြီး မျက်လွှာချထားတဲ့ pose က အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ဖစ်ပါတယ်။ ဒီ pose လေးကိုပဲ ခပ်မှိုင်းမှိုင်း filter လေးတွေနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် အရမ်းဂေါ်တဲ့ selfie လေးတွေရနိုင်ပါတယ်။ Vivo V15Pro မှာဆိုရင် Camera ထဲမှာကိုပဲ filter လေးတွေ အများကြီးပါတာဖြစ်လို့ ချစ်တို့က Vivo fan မို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေဆီကပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းကြုံရင်စမ်းကြည့်ကြပါအုံးလို့။
(၃) Down Low Angle
Selfie ကင်မရာကို အာက်နည်းနည်းချရိုက်ခြင်းက ချစ်တို့ကို အမြင်ဆန်းတဲ့ selfie ပုံလှလှလေးတွေ ပးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ angle ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ချစ်တို့ရဲ့ မျက်နှာရော ဆံနွယ်လေးတွေပါ ပုံထဲပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ down low angle နဲ့ မရိုက်ခင် ချစ်တို့ရဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေနဲ့ မျက်နှာလေးတွေကို သချာ လှလှလေးတွေ ပင်ထားဖို့ လိုမယ်နော်။
(၄) Selfie Stick
တကယ်လို့ ချစ်တို့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်တွေစား၊ အပြင်တူတူသွားပြီး အဖွဲ့လိုက် selfie
ရိုက်ရတာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် selfie stick လေးက အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်မှာ
ပာပြခဲ့သလိုပဲ Selfie stick နဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်တာကလဲ ချစ်တို့ကို perfect selfie angle လေးတွေ ပးပါလိမ့်မယ်။
၃။ အလင်းသည်သာ အခရာ
ချစ်တို့ရေ selfie ရိုက်တဲ့အခါ အလင်းအမှောင်ရဲ့ အရေးပါမှုကိုလဲ မ့ထားလို့မရပါဘူးနော်။ Pose လေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း Lighting မကောင်းရင် selfie ပုံလှလှလေးတွေ ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Selfie ရိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာလေးက အဓိကကျတဲ့အတွက် မျက်နှာပေါ် အရိပ်ကျနေရင် ပုံလေးတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ချစ်တို့ရဲ့ သွယ်တန်းလှပတဲ့ မျက်ခုံးလေးတွေ၊ ကာ့ညွတ်နေတဲ့ မျက်တောင်လေးတွေကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ ထင်းထင်းလင်းလင်း မပေါ်အောင် အရိပ်နဲ့ကွယ်ထားသလို ဖစ်နေလို့ပါ။ အဲ့တာကြောင့် selfie ရိုက်တဲ့အခါ Lighting က အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကနေ ပါဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ မိမိကိုယ်ကိုစစ်မှန်စွာပုံဖော်ပါ (Be yourself)
Selfie ရိုက်တဲ့အခါ တစ်ချို့က ကင်မရာရှေ့ရောက်ရင် ဘယ်လို pose ပေးရမလဲမသိတာမျိုး
ဖစ်လေ့ရှိတယ်။ အဲ့တာက ချစ်တို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ဆွဲဆောင်မှုနည်းသွားစေပါတယ်။ ဖစ်နိုင်ရင် pose ပေးတဲ့အခါ ပုံးတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နာက်ပြောင်နေတာမျိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝအတိုင်းလေး အသက်ဝင်အောင် pose ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
တကယ်လို့ ချစ်တို့က ချစ်စရာကောင်းတဲ့ pose လေးတွေလုပ်ဖို့ရှက်နေတတ်သူဆိုရင်တော့ sticker လေးတွေနဲ့ရိုက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Vivo ရဲ့ V15Pro မှာဆိုရင် AR Sticker ဆိုတဲ့ feature လေးပါဝင်တာကြောင့် အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ sticker လေးတွေနဲ့ selfie ရိုက်နိုင်ပါတယ်နော်။
ဒီအချက်လေးတွေက ချစ်တို့ selfie လှလှလေးတွေ ရိုက်တဲ့အခါ အများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ မျှာ်လင့်ပါတယ်။ ချစ်တို့ရဲ့ ideas လေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရှုပ်ထွေးနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရိုးရှင်းနေပါစေ၊ ချစ်တို့ရဲ့ ပုံလေးတွေကို လက်ရာမြောက်အောင် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ ချစ်တို့အတွက် ကင်မရာကောင်းတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးရယ်၊ ဘယ်angle က ချစ်တို့အတွက် အလှဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာရယ် နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ လ့ကျင့်နေဖို့ပဲ လိုပါတယ်နော်။
Previous articleထိုငျးမငျးသားခြော Mario Maurer ရဲ့ လူကွိုကျအမြားဆုံး ရုပျရှငျနှငျ့ တီဗီဒရမျမာ (၄)ခု
Next articleအဆိုပါ အမြိုးသမီး ၃ယောကျတညျးကမှ ကလေးအမမေဟုတျသူက ဘယျသူလဲ။